Xulka Denmark oo u gudbay wareegga Siddeeda ee Koobka EURO 2020 kaddib markii uu guul ka gaaray dhigiisa Wales… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye June 26, 2021
(Amsterdam) 26 Juun 2021. Xulka Denmark ayaa u gudbay wareega Siddeeda ee Koobka EURO 2020 kaddib uu guul kaga gaaray dhigiisa Wales 0-4, kulankii bug-baxda wareega 16-ka ee tartanka qarammada qaaradda Yurub Euro 2020.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 uu ku hoggaaminayay xulka qaranka Denmark.
Daqiiqadii 27-aad xulka qaranka Denmark ayaa hoggaanka u qabtay ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay Kasper Dolberg, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Mikkel Damsgaard.
48 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Kasper Dolberg ayaa wuxuu dheesha ka dhigay 0-2 uu ku hoggaaminayay xulka qaranka Denmark.
Daqiiqadii 88-aad xulka qaranka Denmark ayaa sii dheereysatay hoggaaminta ciyaarta, kaddib markii uu 0-3 ka dhigayb Joakim Maehle oo caawin ka helay saaxiibkiis Mathias Jensen.
90+4 daqiiqo Martin Braithwaite oo caawin ka helay saaxiibkiis Andreas Cornelius ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 0-4 uu ku hoggaaminayay xulka qaranka Denmark
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhammaatay 0-4 uu kaga adkaaday xulka Denmark dhigiisa Weles, kulankii bug-baxda wareega 16-ka ee tartanka qarammada qaaradda Yurub Euro 2020, xulka Denmark ayaa wuxuu sidaas isaga xaadiriyay wareega xiga ee Siddeeda.